कोरोना सङ्क्रमणको केन्द्रविन्दु बनेको उदयपुरबाट आयो एकाबिहानै दुखद खबर – Online Nepal
कोरोना सङ्क्रमणको केन्द्रविन्दु बनेको उदयपुरबाट आयो एकाबिहानै दुखद खबर
May 12, 2020 620
नेपालकै सबैभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमणको केन्द्रविन्दु बनेको उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका–३ भुल्केका ५५ घर मुस्लिम परिवारका छिमेकी मात्र नभएर एकै घरपरिवारका हजुरआमा, नातिनी, ज्वाइँ तथा श्रीमान्, श्रीमतीसमेत कोरोना सङ्क्रमित भएका छन् ।
स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका अनुसार पहिलो चरणमा नै २८ जना कोरोना सङ्क्रमित देखिएको भुल्केमा एउटै घरका ६८ वर्षीया हजुरआमा, १८ वर्षीया नातिनी र ३८ वर्षीय ज्वाइँ कोरोना सङ्क्रमित भएका थिए । गत शनिबार थप चार जनामा पुनः कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि ती चारमध्ये दुई जना एउटै घरका ४५ वर्षीय श्रीमान् र ४३ वर्षीया श्रीमती रहेको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले बताएको छ ।
अहिलेसम्ममा नेपालकै सबैभन्दा बढी ३२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको भुल्केको ५५ घर मुस्लिम परिवारमध्ये दुई÷तीन घरका सङ्क्रमित एउटै घरका रहेको कार्यालयले बताएको छ । हालसम्ममा भुल्केमा ३२ सङ्क्रमितमध्ये छ भारतीय जमाती, आठ भुल्केका स्थानीय नागरिक गरेर १४ जना उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भइसकेका छन् । बाँकी २२ जनाको कोशी अस्पताल कोरोना उपचार केन्द्र विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ ।
मुस्लिम परिवार र ३०० घर अन्य समुदाय रहेको भुल्केमा अहिलेसम्म ५५ मुस्लिम घरबाहेक अन्य समुदायमा भने कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।
Prevपारस शाहलाई यसो भन्दै काठमाडौं छाडिन् सोनिकाले
Nextकाठमाडौंबाट गाडीमार्फत खोटाङ पुगेका एक युवाको नतिजा पोजेटिभ
भर्खरै नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डबाट आयो यस्तो दुखद खबर
मेघ गर्जन, चट्याङ्ग, हावाहुरी र असिनासहित वर्षा सुरु, मौसमविद्ले जारी गरे यस्तो चेतावनी
पक्राउ परे पछी कोरोना भाईरस झन् फैलाउँछु भन्छिन् यी युवती !
हेन्डसम ईण्डियन लाहुरेकी ४ वर्षिया छोरीलाई के भयो यस्तो? ममी सम्झेर सधै रुन्छिन.. (हेर्नुहोस भिडियो)
नारायणी काण्ड: ज्वाइँकै कारण छोरीले यस्तो कदम उठाईन भन्दै माईति आयो पहिलो पटक मिडियामा। (हेर्नुहोस भिडियो)